Progressive Voice Myanmar » Chin Woman Recovering in Hospital after Artillery Shell Detonates in Village in Rakhine State
March 6th, 2020 • Author: Chin Human Rights Organization • 1 minute read
(Ann Township, Rakhine State – 6th March 2020)
On 2nd March 2020, Ma Soe Soe Ye was rushed to hospital in Ann Township, after an explosion took place in Kyaik Chaung Village. 18-year-old Ma Soe Soe Ye underwent surgery to extract shrapnel from the right side of her stomach, injuries sustained from the blast. The incident took place at approximately5p.m. as Ma Soe Soe Ye was cooking food;
ရွာနားလက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ပေါက်ကွဲရာ အမျိုးသမီးငယ်တဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက် ဆေးဝါးကုသနေ
(အမ်းမြို့ – ၀၅၊ ၀၃၊ ၂၀၂၀)
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာတရွာအနီးနားမှာ လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရတဲ့အတွက် အမ်းမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေလျှက်ရှိကြောင်း ဒေသခံတဦးက ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ထံ သတင်းပေးပို့ပါ သည်။
၀၂၊ ၀၃၊ ၂၀၂၀ရက်နေ့ ညနေ(၅)နာရီအချိန်လောက်တွင် အမ်းမြိ့မြို့နယ် ကစုကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု ဂျိတ်ချောင်းကျေးရွာနေ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ် မစိုးစိုးရီသည် အိမ်ထဲထမင်းဟင်းချက်ပြုပ်နေစဉ် ရွာအနား လက်နက်ကြီးကျည် ကျနောက်ပေါက်ကွဲတဲ့အတွက် ယခုလို ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထိုသူကဆက်ဆိုသည်။
လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲတဲ့အတွက် မစိုးစိုးရီဟာ ညာဖက်ဝမ်းဗိုက်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရပြီး အစာအိမ်ကိုလည်းထိမှန်တဲ့အတွက် အရေးပေါ်လူနာအဖြစ် ချက်ချင်းခွဲစိပ်ကုသနေရကြောင်းနှင့် ယခုအခါ အမ်းမြို့ ပြည်သူဆေးရုံမှာ ဆေးဝါးကုသမှုဆက်လက်ခံယူနေလျှက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
“လက်နက်ကြီးက ဘယ်သူဖက်ကပစ်တာလဲဆိုတာတော့ တိတိကျကျပြောလို့မရဘူး၊ သူတို့ရွာရဲ့ အနားအနားတဝှက်မှာ စစ်တပ်စခန်းလည်းမရှိဘူးပေါ့ ဒါပေမဲ့ အမ်းမြို့ဖက်ကနေလာပြီး နယ်မြေ လုံခြုံရေးအတွက် စစ်ကြောင်းထွက်နေတာတွေတော့ပုံမှန်ရှိတယ်၊ အဲဒီနေ့မှာ အဲဒီရွာကနေ နည်းနည်း အလှမ်းဝေးတဲ့နေရာမှာတော့ နည်းနည်းပါးပါး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အသံတွေတော့ကြားနေရတယ်” ဟု သူကဆက်လက်ပြောဆိုပါသည်။
အမ်းမြိ့မှအနောက်ဖက် (၂၈)မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့ ကစုကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု ဂျိတ်ချောင်းကျေးရွာ သည် အိမ်ခြေ(၂၀၀)လောက်ရှိပြီး ချင်းလူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်သော ကျေးရွာအရွာဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။